Ihotele iLa Plantation eSt. Martin icwangcisa umhla wokuvula kwakhona
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeSint Maarten eziQhekezayo » Ihotele iLa Plantation eSt. Martin icwangcisa umhla wokuvula kwakhona
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Iindaba zeSint Maarten eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Matshi 21, 2018
Emva kokuba iNkanyamba u-Irma igqithe eSt. Martin kwiCaribbean phakathi ku-Septemba ka-2017, i-Hotel La Plantation e-Orient Bay ibhengeze ukuba izakuvulwa ngokuthambileyo ngo-Epreli 16, 2018.
Ngenxa yemfuno ephezulu evela kwiindwendwe ezinyanisekileyo ezifuna ukuza eSt.Martin ukubonisa inkxaso yabo kwesi siqithi, ngakumbi iLa Plantation, ihotele ibonelela "ngokuvula okuthambileyo." Oku kuthetha ukuphinda kuvulwe ngokuyinxalenye ngokufumaneka okuncinci, iinkonzo kunye nezibonelelo. Ezi zithintelo zinokulungiswa nangaliphi na ixesha, nangona kunjalo, ihotele ayinakuqinisekisa ukuba ezi nkonzo ziya kufumaneka ngexesha lokubhukisha.
Okwangoku, ii studio kunye ne suites azinayo intambo yeTV okanye uqhagamshelo lweWi-Fi, kodwa iWi-Fi iya kufumaneka kwindawo yokwamkela. Iinkonzo zokwamkela ezingama-24/7 azizukufumaneka. Xa kungekho mntu usebenza kwidesika yolwamkelo, iindwendwe zinokunxibelelana nabasebenzi berestyu okanye ngomnye wabasebenzi ngefowuni. Kuza kubakho ukulungiswa okuqhubekayo kwindawo, ngoko ke iindwendwe ziya kuhlala kwiindawo zokuhlala ezikude kangangoko kunokwenzeka ukulungiswa kwezindlu.
Iindwendwe azizukuyisebenzisa indawo yokutyela ngaselunxwemeni enezitulo zokuphumla kunye neambrela kude kube lixesha lasehlotyeni. Okwangoku, nangona kunjalo, kukho indawo yokuma ye-BBQ “LoLo” ebekwe ngasezantsi elunxwemeni lolwandle, kodwa iindwendwe ziya kuhlawuliswa ngokusetyenziswa kwezixhobo zazo.
Njengoku kuhlaziywa kukho iindawo zokutyela ezingaphezu kwe-140 ezivulekileyo (ikakhulu kwicala laseLeeward lesiqithi), kunye neevenkile ezininzi, iivenkile zokutya, izitishi zegesi, iibhanki kunye namaziko ezonyango. INkosazana uJulianna yamkela iinqwelomoya ezilinganiselweyo, kwaye iinqanawa zokuhamba ngenqanawa ziya kwizibuko laseSt. Maarten ePhilipsburg.
Abahambi bakaSavvy bayakuxabisa iinkonzo zikaShop-n-Drop oya kuthi ngokukhethekileyo athenge iodolo yakho ekwi-Intanethi kwaye ayithengise kakuhle ukutya kwakho ngaphambi kokuba ufike.
I-Orient Bay isazakuba yindawo yomlingo, yokuphumla kwiholide, kwaye enyanisweni, utyelelo phambi kokuba izihlwele zibuye lungangamava amnandi kakhulu! Kukho iindawo zokutyela ezininzi okwangoku ezihambisa iindwendwe e-Orient Bay kubandakanya: Le Piment, Le Table d'Antoine, Cote Plage, Little Italy, Le Petit Bistrot, La Rhumerie, Tai Chi, kunye neCafe Plantation, evulekileyo ehotele isidlo sakusasa nesidlo sangokuhlwa.
Abanini bamashishini abomeleleyo nabanamandla kunye nabahlali abathembele kukhenketho njengowona mthombo wabo wengeniso bamanyene kwinjongo yokubuyisela izinto "kubhetele kune" ASAP eqhelekileyo. Isiqithi besikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye yonke imihla iba ngcono.
IHotel La Plantation iqinisekile ukuba iSt. Martin iza kuba ngcono kunangaphambili. Iya kuba yindawo ekhuselekileyo, ecocekileyo nenendawo yangoku, kodwa igcine umtsalane weCaribbean kunye negama "njengesiqithi esinobuhlobo."